Izizathu ezili-9 zokuba kutheni ukuTyala imali kwiSoftware yokuThengisa kuThengiso lolona tyalo mali luBalaseleyo kuHlumo lweShishini lakho | Martech Zone
Xa kuziwa ekukhuleni kweshishini, ukusetyenziswa kwetekhnoloji akunakuphepheka!
Ukusuka encinci umama kunye nepop iivenkile kumashishini amakhulu, ayinakuphikwa ukuba utyalomali kubuchwephese uhlawula kakhulu kwaye uninzi lwabanini bamashishini ababuqondi ubunzima botyalo-mali kubugcisa obuphetheyo. Kodwa ukuhlala ngaphezulu kwitekhnoloji yokuqhubela phambili kunye nesoftware ayisiyonto ilula. Iinketho ezininzi, ukhetho oluninzi…
Ukutyala imali kwisoftware efanelekileyo yokuthengisa ishishini lakho kubalulekile kwaye kufanele ukuba kube yinxalenye yesicwangciso sokukhula. Kodwa ukuthengisa utyalo-mali lwesoftware ayithethi ngokuba “sisityebi ngokukhawuleza.” Utyalo-mali oluxabisekileyo.
Ukubeka imali ekubhekiseni isoftware yokuthengisa kunye netekhnoloji konke malunga nokukhulisa ishishini lakho kunye nokwandisa inzuzo kwixesha elide. Kwaye, ngelixa oko kuza ngexabiso, kusenokwenzeka ukuba liphantsi kunokuba ucinga.
Ngaba wena kunye neshishini lakho aninakho ukuyihlawula?
Luyintoni utyalo-mali lokuThengisa ngeSoftware?
Wonke umnini-shishini unokukhetha ukuba angayityala phi kwaye njani imali yakhe. Oku kunokuba yiyo nayiphi na into ekuthengeni uluhlu lwezinto kunye nokuqesha abasebenzi, ukuthenga izixhobo kunye neemveliso ozisebenzisayo ukuqhuba ishishini lakho. Kodwa isigqibo sokuba uzokutyala phi kwaye nini sinokukhohlisa.
Kwisithuba sonyaka, iinkampani ezenza ukuthunyelwa kwesoftware kwintengiso yesoftware zinokubona ukukhula okukhawulezileyo kunye nemida engcono yenzuzo. Zininzi iimveliso zesoftware yokuhambisa ngaphandle apho enokwenza ubomi bakho kunye nobomi babasebenzi bakho bube lula.
Abasebenzi abonwabileyo = ukukhula ngakumbi!
Ngesoftware yokuthengisa ethunyelwayo, ayisiyiyo imali oyichithayo; yindlela oyichitha ngayo. Ufuna into ehambelana neenjongo zenkampani yakho kwaye yenze umsebenzi wakho ubelula kwaye ubengcono? Akunyanzelekanga ukuba ibe lulondolozo olubalulekileyo. Konke kuya ezantsi kukhetho olufanelekileyo.
"Ukutyala imali" kwisoftware yokuthengisa edlulayo kuthetha ukufumana iilayisensi kwisoftware yokudlulisa eyimfuneko ekusebenzeni kwemihla ngemihla, kwintengiso okanye kweminye imisebenzi yeshishini. Ngokwesiqhelo, abanini bamashishini baqala ngokuthenga isoftware yokuthengisa abayithumeleyo ekufuneka beyiqhubile ishishini ngelixa belinde ukuthenga iilayisensi "zokuba nazo" isoftware kamva.
Ngeelayisensi ezibiza naphi na ukusuka kwiisenti ezimbalwa ukuya kumawaka eedola; kwaye ezinye zineendleko zokuhlawula kube kanye, ezinye zisenza intlawulo ephindaphindwayo yenyanga, akukaze kubaluleke kangako ukulinganisa zonke iinketho ngaphambi kokutyala imali kuthengiso lwezixhobo zokuthengisa.
Ngaba ukuTyala imali kwiNtengiso yeNkqubo yokuThengisa kunceda njani ukukhula koShishino?
Nokuba ungumnini wokuqalisa okanye ungumphathi wenkqubo yokusebenza ngokudibeneyo, ayinguye wonke umntu okholelwa ekubeni ukutyala imali kwisoftware yokuthengisa kuthumela ukukhula kweshishini. kwaye Ngokuqinisekileyo lolona tyalo-mali lukhuselekileyo kulo naliphi na ishishini.
Nazi izizathu ezisithoba ngokukaKirsty McAdam; UMsunguli kunye ne-CEO yenkokeli yokuhambisa isoftware, Isixhobo sokuhambisa ngubani owabelana ngesizathu sokuba ukutyala imali kweyona software isemgangathweni yokuhanjiswa kweyona nto ingcono onokuyenza ekukhuleni kweshishini lakho nakwiqhinga lokuthengisa.
funda Martech ZoneInqaku malunga noMzi-mveliso wokuThunyelwa
Isizathu 1: Hlala Phambi koMdlalo wokuDluliselwa
Enye yezona zinto zilungileyo onokuba nazo njengenkampani kukuhlala uphambi kwabakhuphisana nabo kwaye eyona ndlela ilula yokufezekisa oku kukuba nesona sihambele phambili kwaye silula ukusebenzisa isoftware yokuthengisa esetyenziselwa ukuqhuba ishishini lakho. Kungcono isoftware yokuthengisa ethunyelwe kwishishini lakho, iintshukumo ezingaphantsi kwesikhokelo iqela elinokuthi lenze.
Oku ekugqibeleni kuthetha ukuba banexesha elininzi lokusebenza kweminye imisebenzi ebalulekileyo njengokusebenza nabathengi kunye nokwenza intengiso. Xa unetekhnoloji entsha, uya kuba nakho ukufikelela kwiindlela ezintsha zokugqwesa ezinye iinkampani- nokuba ziziindlela zangoku zokuthengisa, inkqubo enamandla ngakumbi, okanye imveliso ehlengahlengisiweyo.
Ukufumana umlenze kukhuphiswano kuthetha ukuba ishishini lakho liya kutsala abathengi ngokwendalo kwaye likhulise ingeniso yakho. Khawufane ucinge ngexesha lokuba iinethiwekhi zentlalo zazisa amaqonga abo entengiso. Ezo zazisandula ukwamkelwa (zisebenzisa isoftware efanelekileyo ukumilisela amawaka eentengiso kubaphulaphuli bazo) zaluchitha ukhuphiswano lwabo.
Isizathu 2: Ukuphucula ukuSebenza ngokuBhekisa
Ukuba nesoftware efanelekileyo yokuthengisa ikwathetha nokwenza ukuba ishishini lakho lisebenze ngakumbi. Ukusebenzisa isoftware entsha yokuthengisa inokubangela ezinye iincukuthu kunye neentlungu ezikhulayo, kodwa nje ukuba utsibe, ishishini lakho liya kuchuma. Ekugqibeleni, umbuzo omele uzibuze wona njengosomashishini ngulo;
"Ngaba umntu kufuneka enze oku?"
Rhoqo, siqesha abantu ukuba benze imisebenzi eyindinisa kunye neyoyikisayo, kuphela kuba kubonakala ngathi yindlela yokunganyangeki. Kodwa okwesibini esiqala ukuphanda ngezisombululo zale misebenzi yokuthengisa ithunyelwe, sifumanisa ukuba uninzi lwazo lunokuzenzekelayo ngaphandle kwendleko. Oku kuvumela oovimba bethu ukuba bagxile kwimisebenzi yokuthengisa egqithisileyo engenakuzenzekelayo.
Abasebenzi abasebenza ngokuthengisa ngakumbi, abathi, ngaphezulu kwayo yonke enye into, bonwabe ngakumbi ukuba abanikwanga msebenzi wemihla ngemihla. Ngokuthenga isoftware efanelekileyo yokuthengisa, uya kufumanisa ukuba bahlala bekhupha uhlaziyo lokuthengisa. Ukuhlaziywa kwesoftware kuhlala kukhutshwa ukuze kwenziwe inkonzo isebenze ngakumbi, ukwazisa izinto ezintsha, kunye nokuphucula amava omsebenzisi ngokubanzi (UX).
Ekugqibeleni, uhlaziyo lwesoftware luya kunyuka luze lusezantsi kulawulo lwakho lweshishini, lwenze ukuba ishishini lakho liqhubeke ngokutyibilikayo kwaye ngokukhawuleza. Njengoko iinkqubo zokuthengisa ezithunyelwayo zisebenza ngokukuko, amandla eemveliso okanye eenkonzo zokukhula nawo ayanda. Ekwenzeni ukuba ishishini lisebenze ngakumbi, wenza amathuba amaninzi kwinkampani yakho yokuhlangabezana neemfuno ezingakumbi kubathengi.
Kungcono ukuba unakho ukubakhonza abathengi kunye niche; abathengi abonwabileyo baya kuba kwaye ngokuqinisekileyo abantu baya kuthetha ngawe. Okokugqibela, ukusebenza ngokukuko kokuthengisa okusebenzayo kunciphisa umda wempazamo kwimveliso nakwiinkonzo, kusenza ishishini lakho ligcine ingeniso ngakumbi ngokuphucula ukuzaliseka.
Isizathu 3: Nikezela ngeQonga eliBonakalayo lokuKhula kweNtengiso yokuThunyelwa
Utyalo-mali kwisoftware yokuthengisa ethunyelweyo sisigqibo esomeleleyo seshishini esinokuthi songeze ukukhula. Xa uqala ishishini- nakweliphi na ishishini - uqala ngokuncinci. Ithemba kukuba uya kukhula ngokungenammiselo, kokubini kwinani labathengi kunye nengeniso yenkampani uqobo. Ayikho enye intsimi eyandayo njengetekhnoloji.
Xa uthatha isigqibo sokuba uza kutyala ntoni kwishishini lakho, cinga ngento eza kuyinceda ikhule ngokukhawuleza kwaye ngokungaguquguqukiyo. Ngokutyala isoftware yokuthengisa, utyala imali kwisakhono sokudlulisa isoftware kunye nenkampani yakho.
Isizathu 4: Ukufumana izibonelelo zexesha elide ngokuzibophelela ixesha elifutshane
Xa utyala imali kwisoftware yokuthengisa, wenza utyalomali lwexesha elide kwishishini lakho. Into emnandi ngokutyala isoftware yokuthengisa kukuba izibonelelo zinokuhlala iminyaka. Njengoko isoftware yomntu otyala imali ekuphuculeni ekusebenzeni nasekusebenzeni kakuhle, ikhula kuphela kwixabiso kunye nokuphila ixesha elide.
Ngelixa itekhnoloji ayisiyiyo icandelo elizinzileyo, lelinye elihlala likhula. Ukutyala imali kwisoftware ehambisa iinkqubo zakho zeshishini kunqabile ukuba kube sisigqibo esingalunganga.
Ukutyala imali kwiPlatform yeSoftware yokuthengisa - Ukuthenga kwi Inkqubo yesoftware yokuthengisa okanye i-SaaS kuthetha ukuba ubeka isiseko sempumelelo yeshishini lakho. Imali oyichithayo ngoku iyakukhula ngexabiso njengoko izibonelelo zeshishini lakho zivela kutyalo mali.
Ngokomzekelo, utyalo-mali olwenzileyo unyaka kwinkqubo yokuthengisa okanye i-SaaS inokuvelisa izabelo eziphezulu kakhulu kunokutyala imali kumqeshwa osebenzela inkampani yakho ixesha elingaphantsi konyaka. Ingeniso yabasebenzi ineendleko ezinkulu ezinxulumene noko. Ngesoftware yokuthengisa edlulisayo, ayisiyongxaki leyo.
Isizathu 5: Ukuphuculwa kokugcinwa kwabaxhasi
Ngokutyala kwisoftware yokuthengisa, ungabona ukuphucuka okukhulu kunxibelelwano lwabathengi kunye neshishini. Enkosi kwiinkqubo zayo ezakhelwe-ngaphakathi, ukuhanjiswa kwesoftware kuthambekele ekuphuculeni unxibelelwano nabathengi ngokwemvelo.
Nokuba kungenxa ye-imeyile okanye imidiya yoluntu, utyalo-mali kwisoftware yokuthengisa ikunika iindlela ezininzi zokufikelela kubaphulaphuli bakho. Kwelinye icala, ishishini lakho liyakhula ngokuphuhla kunye nokuhlakulela ubudlelwane obuhle kunye nabathengi banamhlanje kunye nabanokubakho. Isoftware yokuthengisa edlulisayo ikwanika nethuba lokuphucula ubudlelwane phakathi kwamashishini.
Ukuba uthatha ukhetho lokuthengisa utyalo-mali kwisoftware, uya kwenza ubudlelwane obunobungcali nenkampani oyikhethileyo. Uya kuba nakho ukudibanisa kunye nokunxibelelana namanye amashishini asebenzisa itekhnoloji efanayo okanye efanayo.
Ishishini lilonke malunga nolwalamano olufanayo kunye nokufumana iindlela zokwandisa kunye nokuhluka. Ukuba usebenzisa olo nxibelelwano kwinzuzo yakho, zombini iinkampani zinokubona ukukhula okukhulu kunye nokuyila. Ngesigqibo esinye semali, unokuvula iingcango zakho kwiseti entsha yoqhagamshelo eyayikade ingekho etafileni ngaphambili.
Isizathu 6: Yandisa imveliso yakho
Ngokuhambelana nokusebenza kakuhle, isoftware efanelekileyo yokuthengisa inokuthi inyuse imveliso. Oku kuyinyani ngokukodwa ukuba isoftware yokuthengisa oyityalileyo yenza lula ii-SOPs zakho zangoku kwaye inike iinkqubo ezithile zeshishini ngokuzenzekelayo. Kuxhomekeke kwesiphi isoftware yokuthengisa okhetha ukutyala kuyo, uya kuphucula imveliso yeenkqubo zakho kunye nabasebenzi.
Inkampani ehlaziyeke ngakumbi ivelisa ngevolumu ephezulu, inempazamo encinci yomntu. Ishishini lakho linokusebenzisa ukuhambisa isoftware yokuthengisa ukucwangcisa imisebenzi kunye nokunciphisa ixesha elithathayo ukugqiba ezinye iinjongo. Ngesoftware efanelekileyo yokuthengisa, unokuhambisa ngokulula imisebenzi ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wenziwe ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Ngokusisiseko, uthenga ixesha lomqeshwa wakho, kwaye ubanike ixesha elingakumbi lokuba bavelise imveliso ekuqhubeni amashishini amatsha.
Isizathu 7: UkuFikelela kuKhuseleko oluNgcono
Amashishini amaninzi ayoyika ukuqhekeza okanye izoyikiso ze-cyber kunye nesizathu esivakalayo. Itekhnoloji yenza ukuba olu loyiko lube lolokwenene. Kunzima ukuba usuku ludlule ngaphandle kweendaba zokuhlaselwa ngokutsha okutsha. Ngokudabukisayo, isoftware yeyona ilungileyo (kuphela?) Ukuzikhusela.
Xa usebenzisa eyona software ikhoyo ngoku, enelayisensi okanye yeqela lesithathu le-SaaS ukulawula ukusebenza kwakho kwemihla ngemihla, inkampani yakho isebenza ngokhuseleko embindini wayo. Iinkampani zesoftware yokuthengisa otyala imali oyithembileyo, kuya kufuneka uyixabise kakhulu intembeko. Udumo lwabo luxhomekeke ekugcineni idatha yakho; kunye nedatha yabathengi bakho ikhuselekile.
Enye enye indlela yokutyala imali kwisoftware yokuthengisa enesigqibo njengesigqibo sexesha elide. Uyayandisa inkampani yakho ngelixa ukhusela iiasethi zakho, izimvo kunye nedatha yabathengi. Nokuba ixabiso lentengiso ethile yokuhambisa imveliso libonakala liphezulu, kufanelekile ukuba kutyalwe imali ukuba kuthetha ukhuseleko. Rhoqo, ukutyala imali kwisoftware efanelekileyo yokuthengisa kunokwenza okanye kuphule ishishini.
Lonke ishishini kufuneka lithathe amanyathelo afanelekileyo ukukhusela ulwazi oluyimfihlo abalugcinayo. Ukutyala imali kwiinkqubo ezikhusela idatha yabathengi ebuthathaka ayisiyiyo kuphela indlela yokunciphisa umngcipheko wokophulwa kwedatha, kodwa inokusebenza njengendawo yokuthengisa xa usazisa ishishini lakho kubaxhasi.
Isizathu 8: Ukuphuculwa kweNtengiso
Yintoni enika ishishini lakho ukukhula kakhulu, kunye okanye ngaphandle kwesoftware?
Ukuthengisa okufanelekileyo kokuthumela.
Eyona nto intle malunga netekhnoloji yinzuzo eniyinikayo xa isiza kwintengiso yokuthunyelwa. Ukusuka kwintengiso yamajelo asekuhlaleni kwintengiso, ukuhanjiswa kweenkonzo zesoftware kwenza ukuba usasaze igama kwaye uvuselele ulwazi malunga neshishini lakho ngokukhawuleza.
Uninzi lweenkonzo zokuthengisa ezithunyelwayo zisetyenziswa ngamawaka wabasebenzisi ukulawula nokulawula iindlela zabo zokuthengisa. Ngokutyala imali kwiinkqubo zokuthengisa ezithunyelwayo ezinje ngezi, ungahlengahlengisa imizamo yakho yentengiso yokuhambisa ngelixa kwangaxeshanye unyusa ukuvezwa kwakho.
Isizathu 9: Vula iiMinyango eNtsha
Kwitekhnoloji entsha kuza amathuba amatsha. Yonke into ukuza kuthi ga ngoku ikhankanya ithuba lokukhula kunye nophuhliso. Kuyinyani konke oko.
Itekhnoloji ivula iingcango ekusenokwenzeka ukuba ubungacingi ukuba zinokwenzeka kwishishini lakho. Iinkampani kwisahlulo sabo sokuqala ukuya kwinqanaba eliphakathi lokukhula kunokwenzeka ukuba zixhamle kutyalo-mali kuthengiso lwesoftware entsha yokudlulisa kunye nabavelisi abazenzayo.
Ngaphandle kotyalo-mali kwisoftware yokuthengisa, inkampani yakho inokuma njengoko iinkqubo ziphelelwe lixesha, abathengi bayishiya imveliso okanye inkonzo, okanye amalungu eqela ayeke ngenxa yokungalungelelani.
Nantsi inyani; Kuphela ziinkampani kunye neemveliso eziguqukayo ezinokusinda kumanqanaba aphezulu kunye noqoqosho lwehlabathi. Xa usenza inkqubela phambili kwimali yeshishini lakho, uya kufumanisa ukuba ishishini lakho aliyi kuphila nje; iya kuchuma. Ngaphandle kotyalo-mali lwesoftware yokuthengisa, inkampani yakho iya kusilela kuba ayizukukhula.
Utyalomali lusentliziyweni yawo onke amashishini. Njengomnini weshishini okanye i-CEO, uthatha isigqibo sokuba iyaphi imali yakho. Ekuphela kwendlela amashishini akhula ngayo xa ukuphindaphinda ngumgaqo osisiseko.
Kuya kufuneka uwenze lo mthetho-siseko wamathuba okuxhamla ngokufanayo kwisiseko sokwenza kwakho izigqibo; ikakhulu xa utyala imali kwisoftware yokuthengisa. Njengoko ubuyela kwibhodi yokuzoba ukuqala konyaka omtsha weshishini, jonga ukuba loluphi utyalo-mali lwesoftware yokuthengisa ekufuneka uyenzile ukuqhubela phambili ishishini lakho phambili.
Nokuba oko kuthetha ukuba yiSoftware encinci njengeNkonzo (SaaSUkuthenga ukulungisa iinkqubo zakho okanye ukutyala imali kwintsebenziswano yexesha elide kunye nenkampani yesoftware yokuthengisa, ayinakuphikwa akukho xesha langoku lokubuza imibuzo enzima. Nje ukuba uchaze ukuba kufuneka utyalomali luphi na, lixesha lokuba lwenzeke.
Ukubhengezwa: Eli nqaku libandakanya amakhonkco obulungu Isixhobo sokuhambisa.
tags: umanyanisoumzi-mveliso wokudlulisaukuthengisa ukuthunyelwaIqhinga lokuthengisa lokuthumelaizizathu zokudlulisaukuthunyelwa kwendlela